China Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu N 39 ụlọ China Manufacturers & Suppliers & Factory
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu N 39 ụlọ - onye na-emepụta ihe, ụlọ ọrụ, onye na-ebu si China
(Total 24 Ngwaahịa maka Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu N 39 ụlọ)
Ebe obibi Mbara Igwe Mpempe Akwụkwọ na-enwu n'okporo ụzọ 30W
Igwe ọkụ nke anwụrụ ọkụ nke 30w Led Street na- abịa na mgbawa dị elu-lumen leds, 30W nke ike LED, ultra-shine 3450Lm, 5000k, nnukwu arụmọrụ nke ìhè. Nke a Igwe ọkụ na-acha anwụ ọkụ na-enwu ọkụ n'abalị nwere ike ịgbanye n'abalị (ọnọdụ dim), gbanyụọ ụtụtụ wee bido ịgba ụgwọ. The Street Light Panel t on on...
Mbara Igwe Mbara Igwe Ọkụ n'okporo ụzọ ọkụ 30W
Anyị 30w Solar Powered Road Ìhè na-abịa na elu-lumen LEDs mgbawa, 30W nke Ikanam ike, na àjà ihe ọṅụṅụ-egbuke egbuke 3450Lm, 5000k, a oké arụmọrụ nke ìhè Nke a Solar Garden Street Light nwere ike a uto atụgharị na n'abalị (inyoghi inyoghi mode), gbanyụọ na ala na-amalite na-ana. The Leadsun Solar Street Light t on...
Mbara Igwe ọkụ n'èzí n'okporo ụzọ ọkụ ọkụ 30W
Igwe ọkụ ọkụ anyị nke hasken ọkụ ọkụ 30w Solar Light Street na- abịa na mgbawa ọkụ, 30W nke ike LED, ultra-shine 3450Lm, 5000k, nnukwu arụmọrụ nke ìhè. Nke a n'Ọnụ Anyanwụ Anyanwụ Street nwere ike a uto ịgbanwuo n'abalị (mode bai), gbanyụọ ụtụtụ ma malite ịgba ụgwọ. The Solar Powered N'èzí Street Ìhè t on...
30W Hyper siri ike Mbara Igwe na-enwu n'ụzọ
Igwe ọkụ Solar Street Light 30w Hyper Tough Solar Street na- abịa na mgbawa elu-lumen leds, 30W nke ike LED, ultra-shine 3450Lm, 5000k, nnukwu arụmọrụ nke ìhè. Nke a Solar Road Ìhè nwere ike a uto atụgharị na n'abalị (inyoghi inyoghi mode), gbanyụọ na ala na-amalite na-ana. The Solar Panel Okporo ámá t on on...
Mpụga ọkụ dị n'èzí LED 30 ogo 800w
Elu ọkụ a dịpụrụ adịpụ na mpụga ọkụ ọkụ 30 ogo 800w nwere ọnụọgụ 65,000lumens. The Lightdoor800w LED ntụpọ 15 ogo dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu ihu ebe 800W Mpụga 800w na 30w bụ IP65 ma chebe...
Mpụga ọkụ ọkụ LED n'èzí 30 ogo 600w
Nsonaazụ a dịpụrụ adịpụ na mpụga ọkụ ọkụ 30 ogo 600w nwere ọnụọgụ 65,000lumens. The mpụga ìhè ọkụ Lightdoor600w 15 ogo bụ ezigbo maka ọkụ n'elu nnukwu ámá egwuregwu, Arenas na egwuregwu ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka basketball n'ụlọikpe, tennis n'ụlọikpe na bọl ubi. Nnukwu ọkụ ọkụ LED a na-enweta dị elu...
Mpụga ọkụ dị n'èzí LED 30 ogo 500w
Nsonaazụ a dịpụrụ adịpụ na mpụga ọkụ ọkụ 30 ogo 500w nwere ọnụọgụ 65,000lumens. The Outdoor500w Ikanam Chakwasa ihie 15 ogo bụ ezigbo maka ọkụ n'elu nnukwu ámá egwuregwu, Arenas na egwuregwu ụlọ ọrụ ndị dị otú ahụ dị ka basketball n'ụlọikpe, tennis n'ụlọikpe na bọl ubi. Nke a nnukwu ikanam High OutdoorLED...
Mpụ ọkụ na-enye ọkụ n'èzí 30 ogo 300w
Nke a dị elu Mmepụta n'èzí LED ntụpọ 15 Celsius 30 Celsius 60 ° 300w nwere ọnụ ọgụgụ 65,000lumens. Ọkụ na- acha ọkụ aja aja dị N'èzí 300w 15 Celsius 30 Celsius 60 Celsius dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe...
120 Watt E39 LED Corn Light Bulb 15600lm
Inye Ike: 100,00pcs per month
120 Watt E39 LED Corn Light Bulb 15600lm Bbier butere ọka ọka , akwa mmiri dị mma maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a mere ka ọka Oriọna-azọpụta n'elu 80% ụgwọ ọkụ site dochie 250W MH / HPS / zoo. Ndụ ndụ LED anyị E39 12 0W Led Bulb Light karịrị awa 50,000, ọkụ ogo ogo 360, ntụgharị agba agba dị elu. Na 120W Led...
80 Watts E39 butere bọlbụ 10400lm
80 Watts E39 butere bọlbụ 10400lm Bbier butere ọka ọka , akwa mmiri dị mma maka LED na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a Led Corn bọlbụ oriọna 80W chekwaa ụgwọ ọkụ eletrik 80% site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ LED anyị nke 80W Led E26 Bulb Light karịrị awa 50,000, ọkụ ogo ogo 360, ntụgharị ntụgharị agba dị elu. Na 80w...
Ogige Ihu Mmiri Ezumike n'Ọdọ Mmiri Ezumike 6500k
Inye Ike: 30,000pcs per month
Iche Iche Nnukwu Mmiri nke Ogige nke Gwara anyị nke 80w nwere ike ịmịpụta ọganiihu dị elu nke 9600lm. Nke a 80w Led Ìhè Light 6500k bụ ndị nnọchi zuru oke maka 300W halogen bọlbụ. Nke a dugara N'èzí Yard Iju Mmiri Ìhè na a mgbanwe metal mgbodo, ọzọ mụ na a pụrụ ịdabere, Ị nwere ike mfe wụnye what`s n'akuku ị...
Ibe kọmpụta LED ọka E39 Bulb 100W
Ibe kọmpụta LED ọka E39 Bulb 100W Bbier 100W butere bọlbụ ọka , igwe anaghị agba ọkụ maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a butere oriọna ọka maka ebe a na-adọba ụgbọala chekwaa ụgwọ ọkụ eletrik 80% site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ LED nke anyị bulb ọka ọka 100W karịrị awa 50,000, ọkụ ogo ogo 360, akwụkwọ...
100W E39 butere bọlbụ 13000lm
100W E39 butere bọlbụ 13000lm Bbier 100W butere bọlbụ ọka , igwe anaghị agba ọkụ maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a Led Corn Bulb Light na- azọputa ụgwọ ọkụ eletrik 80% site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ LED nke Led Corn Bulb Brazil karịrị awa 50,000, ọkụ ogo ogo 360, akwụkwọ ntụgharị agba dị elu. 100b Led...
100W duuru ọka 5000K E26 / E39
100W duuru ọka 5000K E26 / E39 Bbier 120W duziri oriọna E40, igwe ọkụ dị elu maka LEDs na ọkwọ ụgbọ ala. Nke a Led Corn Bulb Light na- azọputa ụgwọ ọkụ eletrik 80% site na dochie 250W MH / HPS / HID. Ndụ ndụ LED nke Led Corn Bulb USA karịrị awa 50,000, ọkụ ogo ogo 360, akwụkwọ ntụgharị agba dị elu. 100b Led Corn Bulb...
300W n'èzí Halogen Ledigharị Ìhè Mmiri Ejiji
Ọkụ a dị elu nke 300 Watt Led Light Light nwere ọnụ ọgụgụ 39,000lumens. Ntughari Ìhè nke Ledera Halogen dị mma maka ịmegharị nnukwu ámá egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe basketball, ogige tennis na ebe egwuregwu bọl, ma ọ bụ nnukwu mpaghara ndị ọzọ. Nnukwu iju mmiri a na-agbapụta mmiri...
Ìhè Mkpịsị Ederede na Mmiri nke 300W 39000LM 5000K
Nnukwu ọkụ ọgbụgba mmiri a na-enwu 300 Watt nwere ọnụ ọgụgụ 39,000lumens. Ìhè Ìhè 300w dị mma maka ịmịcha nnukwu ámá egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ebe egwuregwu dị ka ụlọ ikpe basketball, ogige tennis na ebe egwuregwu bọl, ma ọ bụ nnukwu mpaghara ndị ọzọ. Nnukwu Ìhè Nnukwu Ìhè nke Ọkụ nwere ogo nchedo oke dị...
IP65 Igwe ọkụ Fọd 1000W 2000W maka Ọgba egwuregwu
Ìhè Igwe ọkụ a 1000 Watt nwere ọnụ ọgụgụ dị 130,000lumens. Ìhè Light 1000w dị mma maka ịmịcha nnukwu ama egwuregwu, ebe a na-egwu egwuregwu na ụlọ egwuregwu dịka ụlọ ikpe bọọlụ basketball, ụlọ tennis na ebe egwuregwu bọọlụ. Nnukwu Iju Mmiri 2000w bụ IP65 ma chebe ya ka mmụba mmiri. Ngwakọta a na-adịgide adịgide nke...
960W duziri ụlọ mmezi ọkụ maka egwuregwu bọọlụ
Min. Nhazi: 2 Piece/Pieces
960W duziri ụlọ mmezi ọkụ maka egwuregwu bọọlụ ✔ 130 LUMENS PER WATT - Udiri ọkụ a na –eme ka ọkụ bọọlụ LED Stadium 960W nwere ọnụọgụ 124,800lumens. Igwe ọkụ bọlb 5000K dị elu dị mma maka ịmịcha nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na ebe egwuregwu dị ka ụlọ ikpe basketball, ogige egwuregwu na ebe egwuregwu, ma ọ bụ...
800W duziri ụlọ njikọ ọkụ ọkụ 5000k
800W duziri ụlọ njikọ ọkụ ọkụ ọkụ 5000K Bbier na-ewebata ụlọ ọrụ Light Light 800W maka nnukwu ụlọ egwuregwu na n'èzí, ma ọ bụ oghere ọ bụla ọzọ chọrọ ezigbo ọkụ. Igwe a na-eji ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ eme ihe na-enye ọkụ elele na oge ọkụ ọkụ efu. IP66 - A na - ekpochi ikpo ọkụ na mmetụta a na -...
800W LED n'èzí ámá egwuregwu
800W LED n'èzí ámá egwuregwu Bbier na - ewebata LightW Light 800W maka nnukwu ime ụlọ na n'èzí, ma ọ bụ oghere ọ bụla ọzọ chọrọ ezigbo ọkụ. Igwe a na-eji ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ eme ihe na-enye ọkụ elele na oge ọkụ ọkụ efu. IP66 - A na - ekpochi ikpo ọkụ na mmetụta a na - eguzogide mmiri na -...
Egwuregwu elu Power 960W mere ka ọkụ na-enwu
Egwuregwu elu Power 960W mere ka ọkụ na-enwu ✔ 130 LUMENS PER WATT - Udiri ọkụ a na –eme ka ọkụ bọọlụ LED Stadium 960W nwere ọnụọgụ 124,800lumens. Igwe ọkụ bọlb 5000K dị elu dị mma maka ịmịcha nnukwu ámá egwuregwu, ebe egwuregwu na ebe egwuregwu dị ka ụlọ ikpe basketball, ogige egwuregwu na ebe egwuregwu, ma ọ bụ...
60w Igwe Ngwá Agha Igodo nke Igodo nke nkwalite mmụta ọsọsọ
50W Ebube n'èzí n'èzí n'èzí
UFO ikanam ìhè 100 Watt 5000k 13000lm
Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu N 39 ụlọ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu N'ụlọ Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Led Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu 600W Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Football Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Cricket Egwuregwu Egwuregwu Egwuregwu Hyperselect